Esi lee ihuenyo nke iPhone anyị na TV na Chromecast | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | | Apple, General, Nkuzi
Google apụtawo mgbe niile maka ịbụ engine nchọta weebụ kachasị mkpa n'akụkọ ihe mere eme, kamakwa maka ịbụ onye nwe YouTube na gam akporo, nke a na-eweta ụfọdụ akụkụ dị ka ChromeCast. Ngwaọrụ nwere ike ịgbanye telivishọn ọ bụla n'ime SmartTV ekele maka njikọta na ama anyị n'iji eriri ikuku. Mana gịnị ga - eme mgbe ama anyị nwere bụ Apple iPhone? Ọfọn, n'agbanyeghị agbanyeghị ndakọrịta na ngwaọrụ a, anyị anaghị efunahụ ụfọdụ ọrụ, nke kachasị mkpa bụ ịlele ihe anyị hụrụ na ihuenyo nke iPhone anyị ozugbo na ihuenyo nke telivishọn anyị.
Ihe na Inwe ihe Android Smartphone dị mfe dị ka na-eme ya na nwa afọ iji Home ngwa, na iPhone ọ gaghị ekwe omume, ọbụlagodi ya na nghọta. Agbanyeghị n'agbanyeghị nke a, ebe a ka anyị ga-ahụ etu esi etinye ngwa ndị ọzọ iji mee ya.
1 Oyiri ihuenyo anyị iPhone na anyị TV
2 Ingwụnye ngwa na ijikọ na ChromeCast
3 Akụrụngwa na ọrụ
Oyiri ihuenyo anyị iPhone na anyị TV
Ọ bụ ezie na iPhone nwere nhọrọ dị mfe iji mepụta ihe anyị na-ahụ na ihuenyo site na ebe njikwa ya, usoro a na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ị nwere Apple TV nke iji airplay. N'ezie, ọ dịghị onye ga-akwụ ụgwọ ihe Apple TV na-akwụ ụgwọ naanị iji ọrụ a, n'ihi nke ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ iPhone na-enweta chromecast na ọ bụ ezie na ọ bụghị otu ụdị ngwaọrụ ahụ, ọ na-enye ohere iji ọtụtụ ọrụ ndị yiri ya.
Ọ bụrụ na ị nwere ngwụcha nke gam akporo ọ dị mfe etu esi eji [Zipu ihuenyo] site na ngwa Google Home, yana ihe dị mfe chọrọ iji jikọọ na otu netwọk Wi-Fi nke ejiri ngwaọrụ ChromeCast jikọọ.
Nke bụ eziokwu bụ na ime otu ihe ahụ na iPhone anyị agaghị enwe ike iji airplay ma ọ bụ nhọrọ [zipu ihuenyo], mana enwere ngwa nke atọ nke ga-eme kwe ka ime ya n'uzo di nfe. Ngwa anyị na-ekwu maka ya akpọ ya oyiri, enweghị mgbasa ozi ma nweere onwe ya maka obere oge dị ka a igba egbe enye, ya mere ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ iPhone, echela banyere ya iji budata ya, ebe ọ na-emezu n'ụzọ pụrụ iche iji rụọ ọrụ anyị na-achọ na post a.
Ingwụnye ngwa na ijikọ na ChromeCast
Mgbe nbudata ngwa si App Store nke iOSNaanị jikọọ na otu Wi-Fi network nke jikọrọ ChormeCast anyị ma hapụ ka ngwaọrụ anyị chọta ChromeCast nke anyị chọrọ ijikọ. Mgbe ịchọta ya, naanị anyị ga-enye ya iji jikọọ na ọ ga-egosi anyị ChromeCast nke anyị jikọtara, na anyị ga-enwe nhọrọ ịmalite yiri enyo na ihuenyo.
The ngwa na-eji iPhone si ihuenyo ndekọ ngwá ọrụ oyiri ọdịnaya, ma echegbula banyere nke a dị ka ọ na-agaghị echekwa ihe niile anyị na-Broadcasting site na anyị telivishọn na anyị iPhone. Na ule m emere na iPhone 11 njikọ ahụ esiteghị na ntaramahụhụ ma ọ bụ ụdị microcut ọ bụla, ọ na-adịgide adịgide mgbe niile. N'adịghị ka ngwa niile m gbalịrị tupu.
Akụrụngwa na ọrụ
Ọ bụrụ n’ịche ihe anyị nwere ike iji ngwa ọrụ a, lee ụfọdụ ndụmọdụ ma ọ bụ ndụmọdụ ga-agaghị ekwe omume na-enweghị ya. Ọmụmaatụ jiri anyị iPhone dị ka a desktọọpụ video egwuregwu njikwa, ebe ọ bụ na anyị nwere ike jikọọ a remote ka anyị iPhone na-eji TV na-egwu.
Nakwa ikiri vidiyo ma ọ bụ ọdịnaya sitere na ihe nchọgharị weebụ anyị nke iPhone, ma ọ bụ nanị iji iPhone anyị na-agagharị na ịntanetị na telivishọn anyị. Gosi foto na vidiyo anyị nwere na tiivi anyị ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi nọ n’ụlọ ileta ma ọ bụ lere ha anya na TV ọzọ nke nwekwara ChromeCast ejikọtara, ma ọ bụ were nke anyị ebe ọ bụla iji mee ya.
Ihe niile dị mfe yana naanị ihe achọrọ iji nweta ChromeCast, iPhone anyị na njikọ Wi-Fi, Ọ bụrụ na anyị enweghị ChormeCast ebe a, anyị ga-ahapụ njikọ na ụlọ ahịa gọọmentị nke Google ebe anyị nwere ike iji ya mee ya, ọ bụ ngwaọrụ dị ọnụ ala, ọ bụrụ na anyị lelee ihe niile ọ nwere ike ime.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Esi lee ihuenyo iPhone na TV na ChromeCast